६०औं विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन भव्य रुपमा गर्ने निर्णय — Bhaktapurpost.com
बाबुकाजी श्रेष्ठमध्यपुर थिमि, २६ भदौ २०७८
मध्यपुर थिमि, २६ भदौ २०७८
भक्तपुरको ऐतिहासिक संस्था विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुथिको ५४ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय अजिमा पार्टी प्यालेसमा शनिवार साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।
गुथिका अध्यक्ष महेन्द्रगोपाल कर्माचार्यको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि गुथिका पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य नरेन्द्र भक्त हाडाले गरेका थिए । उनले गुथि स्थापना गर्दाका अनुभव सुनाउदै यसको आरोह अवरोह हरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
गुथिका सदस्य विजेन्द्रवीर कर्माचार्यले स्वागत गरी शुरु भएको उक्त साधारण सभामा गुथिका सचिव पुष्पलाल तिमिलाद्वारा प्रस्तुतआ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आ.व. २०७८/७९ को आगामी कार्यक्रम तथा कोषाध्यक्ष रामगोपाल चगुथिद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७७/७८ को आर्थिक प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको बताइएको छ ।
गुथिले आगामी कार्य योजनाको रुपमा गुथिको भवन निर्माण गर्न बागमती प्रदेश सरकारबाट रू. १००००००।– सहयोग प्राप्त हुने जानकारी दिइएको छ । यसवर्ष भवन निर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भवन निर्माणको लागि आर्थिक सहयोगको अपेक्षा समेत गरिएको उक्त सभामा ६०औं विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन भव्य रुपमा गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गुथिका पूर्व अध्यक्ष एवं साहित्यकारहरु डा. योगेन्द्र प्रधान, त्रिरत्न शाक्य, गोविन्दमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त बोडे र प्रदिप शाक्य उपस्थित रहेका थिए । सोही कार्यक्रममा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ र उमा श्रेष्ठले गुथिको भवन निर्माण गर्न रू. २५०००।– आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । कार्यक्रम गुथिका सदस्य बाबुकाजी सुवालले संचालन गरेका थिए ।